သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရခဲ့တဲ့ ဖခင်အတွက်အဝေးကနေ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ – Cele Oscar
နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ မင်းသမီး ကြီး ခင်ဇာခြည်ကျော် ရဲ့ သားအကြီး ဖြစ်သူ ဘုန်းမင်းနေလ ကတော့ အကယ်ဒမီ ရွှေကြိုမောင် တစ်ယောက် အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပြီးနောက် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ သတိထား အားပေးခြင်း ကို ခံခဲ့ရသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းမင်းနေလ ကတော့ အခု ဆိုရင် အသက် (၁၈) နှစ် ကျော်အရွယ် သာရှိသေး ပေမယ့် အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင် နေပြီး ကြော်ငြာတွေ မှာ လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင် နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းမင်းနေလက အလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်လာတာ နဲ့ အမျှ သူတို့ မောင်နှမ ကို Single Mother တစ်ယောက်အနေ နဲ့ ရပ်တည်ကျွေးမွေး လာခဲ့တဲ့ မိခင် ခင်ဇာခြည်ကျော်ကိုလည်း ပြန်လည် ပြုစုစောင့်ရှောက် နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင် အပေါ် သားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေ တဲ့ ဘုန်းမင်းနေလ က သူ့ရဲ့ ဖခင်နဲ့ အတူတူ မနေပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် မှာလည်း ဘုန်းမင်းနေလ က သီဟသုဓမ္မမဏိဇောတဓရဘွဲ့ တံဆိပ်ကို ရရှိသွားခဲ့တဲ့ ဖခင်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း “Congratulation Dad.. Good For You eh? ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် My Day ကနေတဆင့် ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းမင်းနေလ ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်း က အနေဝေးသွား ခဲ့တဲ့ ဖခင် ရဲ့ နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ တံဆိပ်ရရှိမှုအပေါ် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
နိုငျငံကြျော အကယျဒမီ မငျးသမီး ကွီး ခငျဇာခွညျကြျော ရဲ့ သားအကွီး ဖွဈသူ ဘုနျးမငျးနလေ ကတော့ အကယျဒမီ ရှကွေိုမောငျ တဈယောကျ အဖွဈ ပါဝငျဆောငျရှကျခဲ့ ပွီးနောကျ ပရိသတျတှေ ရဲ့ သတိထား အားပေးခွငျး ကို ခံခဲ့ရသူ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘုနျးမငျးနလေ ကတော့ အခု ဆိုရငျ အသကျ (၁၈) နှဈ ကြျောအရှယျ သာရှိသေး ပမေယျ့ အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျ နပွေီး ကွျောငွာတှေ မှာ လညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျ နပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘုနျးမငျးနလေက အလုပျတှေ လုပျကိုငျလာတာ နဲ့ အမြှ သူတို့ မောငျနှမ ကို Single Mother တဈယောကျအနေ နဲ့ ရပျတညျကြှေးမှေး လာခဲ့တဲ့ မိခငျ ခငျဇာခွညျကြျောကိုလညျး ပွနျလညျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျ နိုငျဖို့ ကွိုးစားနေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မိခငျ အပျေါ သားကောငျး တဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားနေ တဲ့ ဘုနျးမငျးနလေ က သူ့ရဲ့ ဖခငျနဲ့ အတူတူ မနပေမေယျ့ စိတျထဲမှာ အမွဲတမျး ရှိသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျ မှာလညျး ဘုနျးမငျးနလေ က သီဟသုဓမ်မမဏိဇောတဓရဘှဲ့ တံဆိပျကို ရရှိသှားခဲ့တဲ့ ဖခငျအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျကွောငျး “Congratulation Dad.. Good For You eh? ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျ My Day ကနတေဆငျ့ ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘုနျးမငျးနလေ ကတော့ ငယျငယျကတညျး က အနဝေေးသှား ခဲ့တဲ့ ဖခငျ ရဲ့ နိုငျငံတျောက ပေးအပျတဲ့ ဂုဏျထူးဆောငျဘှဲ့ တံဆိပျရရှိမှုအပျေါ ဝမျးသာဂုဏျယူကွောငျးပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာ ပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
သူပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံလိုက်တဲ့ ခြိမ့်ကေကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီသွားမယ်လို့ ဒိန်းဒေါင်ပြော